Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.2 mpiara-miombon'antoka amin'ny ny matanjaka
Ny hafa ny manao izany ny tenanao dia miara-miasa amin'ny fikambanana mahery vaika toy ny orinasa, ny governemanta, na ny ONG. Ny tombony ny miara-miasa amin'ny mpiara-miasa dia ny hoe afaka manampy anao mba hihazakazaka fanandramana izay ianao vao afaka manao ny tenanao. , Ohatra, iray amin'ireo andrana izay aho hitantara aminareo ny momba ambany anjara 61 tapitrisa mpandray anjara; tsy misy olona afaka hanatratra izany mpikaroka mizana. Mandritra izany fotoana izany izay miara-miasa mitombo izay azonao atao, io koa, miara, Manery anao. , Ohatra, ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy hamela anareo ho mihazakazaka ny fanandramana izay mety hanimba ny raharaham-barotra, na ny lazany. Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa ihany koa dia midika fa rehefa tonga ny fotoana mba hamoahana, dia mety eo ambany fanerena "re-toetsika" ny vokatra, ary ny sasany mety mpiara-miasa mihitsy aza miezaka ny hanakanana ny famoahana ny asa raha toa ka mahatonga azy ireo mijery ratsy. Farany, miara-miasa ihany koa ny avy amin'ny vola mifandray amin'ny fampandrosoana sy ny fihazonana ireo fiarahamiasa.
Ny fototra fanamby izay tsy maintsy vahana mba hahatonga ireo fiaraha-miasa mahomby dia ny fitadiavana ny fomba hampifandanjana ny tombontsoan'ny roa tonta, ary ny fomba manampy ny mieritreritra momba izany Pasteur mizana dia ny Quadrant (Stokes 1997) . Maro ny mpikaroka mihevitra fa raha toa ka miasa amin'ny zavatra mahasoa-zavatra izay mety ho mahaliana ny mpiara-miasa, dia tsy azo manao tena siansa. Izany fisainana izany dia ho tena sarotra ny hamorona fiaraha-miasa mahomby, ary izany koa no mitranga ho diso tanteraka. Ny olana amin'ny fomba fisainana izany dia mahatalanjona ny Mampiseho ny lalana-fandikana fikarohana ny mpikaroka Louis Pasteur. Raha ny ara-barotra miasa amin'ny tetikasa fermentation mba hiova betiravy ranom an-toaka, Pasteur nahita vaovao kilasy zavamiaina bitika dia bitika izay nitarika ho amin'ny farany ny mikraoba teorian'ny ny aretina. Zavatra tsy nahita ny tena mahasoa namaha olana-dia nanampy hanatsarana ny dingan'ny fermentation-ary izy io hitarika ny lehibe mialoha ara-tsiansa. Noho izany, fa tsy mieritreritra ny fikarohana amin'ny fampiharana azo ampiharina toy ny amin'ny ady amin'ny tena fikarohana siantifika, fa tsara ny mieritreritra ireo toy ny lafiny roa samy hafa. Fikarohana azo atosiky ny fampiasana (na tsia) sy ny fikarohana dia afaka mitady fototra fahatakaran-javatra (na tsia). Manakiana, fikarohana-tahaka Pasteur's-azo atosiky ny fampiasana sy ny mitady fototra fahatakaran-javatra (Sary 4.16). Research in Pasteur ny Quadrant-fikarohana izay tena hoe mandroso tanjona roa-dia tsara ho an'ny mpikaroka sy ny fiarahamiasa eo amin'ny mpiara-miasa. Noho izany fototra, aho mamaritra fanandramana roa fampianarana amin'ny fiaraha-miasa: ny iray amin'ny orinasa ary ny iray miaraka amin'ny ONG.
Sary 4,16: Pasteur ny Quadrant (mifototra amin'ny Fig 3.5 avy Stokes (1997) ). Tsy nieritreritra ny fikarohana toy ny na "fototra" na "mampihatra" dia tsara kokoa ny mihevitra ny fikarohana araka izay atosiky ny fampiasana (na tsia) ary mitady fototra fahatakaran-javatra (na tsia). Ohatra iray ny fikarohana fa samy no atosiky ny fampiasana sy mitady fahiratan-tsaina fototra dia ny asa Pasteur hanova betiravy ranom ho toaka izay hitarika ho amin'ny mikraoba teorian'ny ny aretina. Izany no karazana asa izay no tsara indrindra ho an'ny fiaraha-miasa mifanaraka amin'ny mahery. Ohatra ny asa atosiky ny mampiasa nefa tsy mitady fahalalana fototra avy Thomas Edison, ary ohatra ny asa izay tsy atosiky ny fampiasana izay mikendry ny fahatakarana fa tonga avy any Niels Bohr. Jereo ny Stokes (1997) ho lalina kokoa momba io rafitra sy ny tsirairay amin'ireo tranga.
Large orinasa, indrindra fa ny teknolojia orinasa, efa mandroso be pitsiny mampino foto-drafitr'asa ho an'ny nihazakazaka fanandramana sarotra. Ao amin'ny teknolojia orinasa, ireo fanandramana matetika antsoina hoe A / B fitsapana (satria izy ireo hizaha toetra ny fahombiazan'ny fitsaboana roa: A sy B). Ireo fanandramana ireo matetika nihazakazaka ho an'ny zavatra toy nitombo tsindrio-amin'ny alalan'ny tahan'ny amin'ny dokam-barotra, nefa ny iray ihany koa ny foto-drafitr'asa andrana azo ampiasaina ho an'ny fikarohana ara-tsiansa izay mandroso fahazavan-tsaina. Ohatra iray izay mampiseho ny mety ho toy izany ny fikarohana dia ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka ao amin'ny Facebook sy ny University of California, San Diego, ny vokatry ny hafatra samy hafa eo amin'ny mpifidy taham-pahavitrihana (Bond et al. 2012) .
Tamin'ny November 2, 2010-ny andro amin'ny kaongresy Amerikana fifidianana-rehetra 61 tapitrisa ireo mpampiasa Facebook izay monina any Etazonia sy mitondra 18 nandray anjara tamin'ny fanandramana momba ny fifidianana. Rehefa nitsidika Facebook, ireo mpampiasa ireo tsapaka notendrena ho iray amin'ireo vondrona telo, izay tapa-kevitra inona no tsy ampy (raha misy) napetraka teo an-tampon'ny ny News Feed (Sary 4.17):
ny fampahafantarana hafatra momba ny fifidianana amin'ny clickable "Nifidy aho" bokotra sy manohitra (Info).
ny fampahafantarana hafatra momba ny fifidianana amin'ny clickable "Nifidy aho" bokotra sy ny manohitra + anarana sy ny sary ny namany, izay efa voakitika ny "nifidy aho" (Info + ara-tsosialy).
Bond sy ny mpiara-miasa nianatra vokatra roa lehibe: nitatitra fifidianana fitondran-tena sy fitondran-tena tena fifidianana. Voalohany, dia nahita fa ny olona ao amin'ny vondrona ara-tsosialy Info + dia tokony ho 2 isan-jato hevitra kokoa noho ny olona ao amin'ny Info vondrona mba tsindrio "Nifidy aho" (20% vs 18%). Ankoatra izany, araka ny mpikaroka natambatra ny tahirin-kevitra amin'ny ampahibemaso misy fifidianana firaketana an-tsoratra nandritra ny 6 tapitrisa ny olona dia nahita fa ny olona ao amin'ny Info + ara-tsosialy vondrona dia 0,39 isan-jato hevitra kokoa ny tena hifidy noho ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny toe-javatra sy ny olona ao amin'ny Info vondrona toy mety hifidy tahaka ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny toe-(Sary 4.17).
Sary 4,17: Vokatra avy amin'ny hahazoam-avy-ny-fifidianana andrana tao amin'ny Facebook (Bond et al. 2012) . Ireo mpandray anjara ao amin'ny vondrona Info nifidy miaraka amin'izay koa taha tahaka ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny toe-javatra, fa ny olona ao amin'ny vondrona ara-tsosialy Info + nifidy amin'ny kely kokoa ny tahan'ny. Bars dia ireo tombanana ho 95% matoky intervals. Vokatra eo amin'ny sary dia ahitana ny 6 tapitrisa mpandray anjara ho an'ny mpikaroka izay mety mitovy ny fifidianana firaketana an-tsoratra.
Ity fanandramana aterineto dia mampiseho fa ny sasany hahazoam-avy-ny-bato hafatra dia mahomby kokoa noho ny hafa, ary mampiseho fa ny mpikaroka Tombanana ny fahombiazan'ny fitsaboana iray dia afaka miankina na fanadihadiana na tena fitondran-tena. Io fanandramana indrisy tsy manolotra misy fanazavana momba ny rafitra alalan 'izany ny ara-tsosialy vaovao-izay mpikaroka sasany efa playfully hoe "face antontany" -increased pifidianana. Mety ho vaovao fa ny ara-tsosialy nampitombo ny mety fa nisy olona nahamarika ny faneva na fa nitombo ny mety fa nisy olona izay nahatsikaritra ny faneva nifidy na roa raha ny marina. Noho izany, io dia manome mahaliana fanandramana mahita fa bebe kokoa dia azo inoana fa hijery mpikaroka (jereo ohatra, Bakshy, Eckles, et al. (2012) ).
Ankoatry ny fampandrosoana ny tanjona ny mpikaroka, fanandramana io koa nandroso ny tanjon'ny fikambanana ny mpiara-miasa (Facebook). Raha hanova ny fitondran-tena nianatra avy hifidy ny mividy savony, dia afaka mahita fa ny fianarana dia manana ny tena mitovy rafitra toy ny fanandramana mba handrefesana ny vokatry ny dokam-barotra anaty aterineto (jereo ohatra, Lewis and Rao (2015) ). Ireo dokam-barotra matetika mandaitra fianarana handrefy ny vokatry ny hatsiaka amin'ny dokam-barotra anaty aterineto, ny fitsaboana in Bond et al. (2012) ireo dokam-barotra ho an'ny fifidianana ankapobeny-on ivelan'ny aterineto fitondran-tena. Noho izany, ity mety hampandroso Facebook fianarana ny fahafahana hianatra ny fahombiazan'ny dokam-barotra anaty aterineto, ary afaka manampy Facebook mpanao dokam-barotra fa mety handresy lahatra Facebook dokam-barotra dia mahomby.
Na dia izay mahasoa ny mpikaroka sy ny mpiara-miasa dia ny ankamaroany mifanaraka amin'ny fianarana izany, izy ireo ihany koa ny ampahany amin'ny fihenjanana. Indrindra indrindra, ny fanomezana ny mpandray anjara ho amin'ny toe-piainana telo-po, Info, sy Info + sosialy-dia faran'izay imbalanced: 98% ny santionany dia nasaina Info + ara-tsosialy. Io imbalanced fanomezana no tsy mahomby ny antontan'isa, ary ny fanomezana tsara kokoa noho ny mpikaroka no ho 1/3 ny mpandray anjara ao amin'ny vondrona tsirairay. Nefa, ny imbalanced Facebook fanomezana nitranga satria naniry ny rehetra mba handray ny Info + fitsaboana ara-tsosialy. Soa ihany fa nandresy lahatra azy ireo ny mpikaroka mba miahotra ny 1% ho mifandray fitsaboana sy ny 1% ny mpandray anjara ho fanaraha-maso ny vondrona. Raha tsy misy ny fanaraha-maso ny vondrona mety ho azo ankapobeny mba handrefesana ny vokatry ny fitsaboana ara-tsosialy Info + satria ho efa "perturb sy mitandrina" andrana fa tsy voafehy ny randomized fanandramana. Ity ohatra dia manome lesona sarobidy mahasoa ny miara-miasa amin'ny mpiara-miasa: indraindray ianao mamorona fanandramana alalan'ny fandresen-dahatra ny olona mba hamonjy ny fitsaboana, ary indraindray ianao mamorona fanandramana alalan'ny fandresen-dahatra olona tsy mba hanafaka ny fitsaboana (izany hoe, mba hamorona ny fanaraha-maso ny vondrona).
Partnership Tsy mila anjara foana teknolojia orinasa sy A / B fitsapana amin'ny an-tapitrisany ny mpandray anjara. Ohatra, Alexander Coppock, Andrew maminavina, ary John Ternovski (2016) niasa tamin'ny ONG tontolo iainana (Fikambanam-Conservation mpifidy) mba mihazakazaka fanandramana fitiliana tetikady samy hafa noho ny mampiroborobo ny fanentanana ara-tsosialy. Ny mpikaroka Nampiasa ny ONG ny kaonty Twitter mba handefa-panjakana na tsy miankina mivantana bitsika sy ny hafatra izay niezaka voalohany isan-karazany ny mombamomba. Ny mpikaroka dia norefesiny izay ny hafatra ireo dia tena mahomby noho ny mampirisika ny olona hanao sonia ny fanangonan-tsonia sy Retweet vaovao momba ny fanangonan-tsonia.
Table 4.3: Ohatra ny fikarohana izay tonga amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny fikambanana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpikaroka miasa ao amin'ny fikambanana.
Vokatry ny Facebook News Fahano amin'ny fizaram-baovao Bakshy, Rosenn, et al. (2012)
Vokatry ny ampahany anarana amin'ny fitondran-tena amin'ny aterineto mampiaraka namany Sary Bapna et al. (2016)
Vokatry ny Home Energy tatitra momba ny fampiasana herinaratra Allcott (2011) , Allcott and Rogers (2014) , Allcott (2015) , Costa and Kahn (2013) , Ayres, Raseman, and Shih (2013)
Vokatry ny fampiharana nanaovana amin'ny niparitaka be niely Aral and Walker (2011)
Vokatry ny fampielezana rafitra amin'ny diffusion Taylor, Bakshy, and Aral (2013)
Vokatry ny fanazavana ara-tsosialy ao amin'ny dokam-barotra Bakshy, Eckles, et al. (2012)
Vokatry ny katalaogy matetika eo amin'ny varotra amin'ny alalan'ny Catalog sy anaty aterineto ho an'ny isan-karazany ny mpanjifa Simester et al. (2009)
Vokatry ny lazany vaovao amin'ny asa mety fampiharana Gee (2015)
Vokatry ny voalohany naoty amin'ny lazany Muchnik, Aral, and Taylor (2013)
Vokatry ny hafatra ara-politika afa-po tamin'ny fanentanana Coppock, Guess, and Ternovski (2016)
Amin'ny ankapobeny, miara-miasa amin'ny ny mahery dia manome fahafahana ho anareo miasa amin'ny ambaratonga izay no Sarotra ny Manao Raha tsy izany, sy ny Table 4.3 dia manome ohatra hafa ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny fikambanana. Miara-miasa dia mety ho mora kokoa noho ny hananganana ny ny fanandramana. Nefa, ireo tombony avy amin'ny fatiantoka: fiaraha-miasa dia afaka mametra ny karazana mpandray anjara, fitsaboana, sy ny vokatra izay afaka mianatra. Ankoatra izany, fiaraha-miasa ireo dia afaka mitarika ny etika olana. Ny fomba tsara indrindra ny mamantatra fahafahana ho an'ny fiaraha-miasa dia ny mahita ny tena olana fa afaka hamaha rehefa manao mahaliana siansa. Raha tsy zatra izany ny mijery izao tontolo izao, dia mety ho sarotra ny mamantatra ny olana ao Pasteur Quadrant, fa amin'ny fampiharana, ianao manomboka mahamarika azy ireo bebe kokoa.